Krishnap.com.np: गुगल बज बिरुद्ध मुद्दा
गुगल बज बिरुद्ध मुद्दा
सोसियल नेटवर्किङ साईटहरुसँगको प्रतिस्पर्धाम उत्रनकालागी गुगलले जिमेलमा थपेको नयाँ फिचर ‘गुगल बज’ विरुद्ध मुद्दा परेको छ । क्यालिफोर्नियाका वासिन्दा इभा हिब्निकका तर्फबाट पार्टनर्स एलएलपि कम्पनीका विलियम अउदेतले गुगल बज बिरुद्धको मुद्दा दायर गरेका हुन् । त्यहाँको संघिय अदालतमा दायर गरिएको मुद्दमा गुगल बजले कम्प्युटरबाट हुने जालसाँजी तथा दुष्प्रयोग ऐन उलंघन गरेको आरोप लगाईको छ ।
सन १९८४ मा पारित भएको ऐनले कम्प्युटरमा राखिएको ब्यक्तिगत सुचनाको विश्वसनियता कायम गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सान फ्रान्सिस्को क्रोनिकल अखबारका अनुसार मुद्दामा गुगललाई यस्ता क्रियाकलापबाट रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ, तर मौद्रिक क्षतिपुर्ती उल्लेख गरिएको छैन ।
जिमेल अकाउण्टमा गुगल बज एक्टिभेट गर्दा मेलमा भएको सबै इमेल एड्रेसहरुलाई बजमा अपडेट हुने फिचरको निक्कै आलोचना भइरहेको छ । यसले गुगल बजमा आउन नचाहने मानिसलाई समेल जर्वजस्ती तान्ने भएकाले ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन भएको धेनैको गुनासो छ ।
Posted by Krishna Pokhrel at 4:34 AM
‘माइण्ड ब्लोइङ’ विण्डोज ८
विण्डोज ७ फोनआँउदै
युरोपमा Internet Explorer को एकाधिकार सकियो
कोटबाटै मोबाईल चार्ज
प्रविधिको जन्म कहिले र जन्मदाता को ?
5 मिनेटमा चाहिएको कुरा जान्न र सिक्न पाइने !
June मा iPhone 4
गुगलले हाइ स्पिड इन्टरनेट नेटवर्क बनाउने
अचम्म !! Sex पर्फमेन्स पनि जाँच्न मिल्ने
अचम्म !! प्यासन पर्फमेन्स पनि जाँच्न मिल्ने
एसएमएसबाटै चलाऔं घरायसी उपकरण
अचम्मका प्रबिधीहरु र हाम्रो जीवन शैलीमा यसको प्रभ...
ब्ल्याकबेरीका १० लुकेका कराहरू
Email गर्नुस र पैसा पाउनुस Microsoft ले तपाइलाइ पैसा दिन्छ ।
तँपाइलाइ थाहाछ अहिलेका दिनहरूमा इमेल Forward निकै चलेको त्यसको खास विषय चाँही के हुन्छ भनेनी तपाइले १० जानालाइ यो मेल पठाउनु भयो भने Microso...